Zai rinopaza muchina
Joinha isu mune ye19 Animal Kuchengeta Expo muNanchang
Ye19 (2021) Yekuchengetwa Kwemhuka Expo ichaitwa kubva Chivabvu 18 kusvika Chivabvu20 kuNanchang Greenland International Expo Center. Dumba redu: No.6B14.in B6 horo yehuku Machinery Area. Kutarisira mberi kukuona iwe ipapo. Muchiitiko ichi chakanaka, Fuzhou Min-tai Machinery Co., Ltd. icharatidza zvigadzirwa zvezai kuisa pac ...
Kuchenesa kuri nyore uye kubvisa diski yegirazi washer grader kurongedza muchina
Nekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu uye kufambiswa kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye pfungwa dzehutano, vatengi vane zvido zvepamusoro zvakanyanya zvehunhu hwezai. Zvinotarisirwa musupamaketi zvemazai akachengeterwa mazai zviri kuwedzera zvishoma nezvishoma. Mazai asina kugadziriswa acharambwa ...
MINTAI mhando yakanaka yekushambidza mazai kurongedza muchina unotengesa mushe pamwe nekuita kwayo kwakanaka
MINTAI yakanaka yemazai yekuwacha grading kurongedza muchina tengesa zvakanaka pamwe nekuita kwayo kwakanaka, inogadzirisika dhizaini uye epamusoro masisitimu. Isu tinoita zvirinani mune zvese zvese zvemuchina. Izai grader packer muchina inobatsira mapurazi kana mazai ekugadzirisa maindasitiri kuchengetedza makuru emabasa emubhadharo, zvakakosha ...
Muchina wekuwacha mazai wakanaka? Sei uchishandisa muchina wekuwachisa zai?
Muchina wekuwachisa mazai haungoponese basa chete, asi zvakare unoderedza mwero wekuparara kwemazai. Zvakanakira hupfumi zvinozviratidza. Kushambidza, kuomesa, uye kumedza machena zvinoita kuti gadziriro yekugadzira zai ionekwe nemufananidzo wechinyakare wetsvina uye yakasviba, uye zvigadzirwa zvinowirirana neazvino f ...
Ndeapi mabasa eanokura mazai?
Iyo yeya grader inoshandisa yayo yega maindasitiri network kugadzirisa mameseji kuidzora. Nekuti netiweki yakadaro inodzivirira kushandiswa kwenhamba yakakura yetambo uye inopa yakasanganiswa-yekuzviongorora uye yekuongorora system, inovimbisa yakachengeteka uye yakavimbika mashandiro emuchina. Iyo yekuisa mazai muchina inosanganisira ...
Pfupiso yaSeptember Exhibition
GUMI NEGUMI (2020) CHINA MHUKU HUSBANDRY EXPO MuMutambo uyu, tinogadzirira michina miviri mudumba medu. Kuisa zai uye kurongedza muchina Item Nha.: MT-101-3 Zita: Egg grading uye kurongedza muchina Main Parameter 1. Kugona: 25000-30000 zai paawa 2. Unganidza nepakati yekuunganidza mutsara kana zai ...
Chiratidziro chirongwa cheGunyana
GUMI NEGUMI (2020) CHINA MHUKU HUSBANDRY EXPO China Yepasi Pese Kuchengetwa Kwezvipfuyo Expo, inozivikanwa seCAHE kutenderera pasirese, inoitwa kubva muna Zvita 4-6 asi mumaguta akasiyana gore rega rega, ndiyo mukurumbira wezvipfuyo muAsia! CAHE anogona kuve akakwana kwazvo mapuratifomu kuti iwe uzive nezve maChinese ...
Fuzhou Mintai Machinery zai peeler muchina maitiro ekuti usakuvadza mazai?
ne admin pane 20-06-30
Mazai eti, mazai akaomeswa, mazai akaomeswa, nezvimwewo izvo zvatinodya kazhinji zvinoda kubviswa, saka chokwadika, mazai mazhinji anoda peeler yeza. Saka sei Fuzhou Mintai Machinery's zai rekuchengetedza risingakuvadze mazai? Ini ndinotenda vanhu vazhinji vanoda kwazvo kuziva izvi. Wese munhu anofanira kunge akadya mazai, wh ...
Maitiro ekunyatso kudzora mashandisiro emushini wezai muchina?
Maitiro ekunyatso kudzora mutengo weii washer muchina. Yedu yekuwachisa zai muchina ine yakasimba robhoti, yakatsiga mashandiro, hapana kubhururuka kwezai, hapana kudonha kwezai, hupenyu hwakareba hwebasa. Iine yakakosha nylon bhurasho, otomatiki yekufambisa yekuchenesa, inozadziswa zvizere mukushandisa muzai kurodha ...
Egg Kupwanya Muchina Vagadziri, Otomatiki Egg Kuputsa Muchina, Mashizha Ekuisa Mashizha,